Ukuqhafaza kwiWebhu: Iimpawu ezilungileyo kunye ezimbi - Ukuchaza okufanayo
Iibhothi zimelela malunga neepesenti ezingama-55 zazo zonke izithuthi zewebhu. Kuthetha ukuba ininzi yendlela yakho ye-intanethi ivela kwi-internet bots kunabantu. I-bot kuyinto yesicelo sesofthiwe esinoxanduva lokusebenza ngokuzenzekelayo kwidijithali - cours de systeme dinformation grh. I-bots ngokuvamile yenza imisebenzi ephindaphindayo ngesivinini esiphezulu kwaye ayithandeki ngabantu. Banoxanduva lwemisebenzi emincinci esivame ukuyithatha, kubandakanywa ukutshekisha kweenjini zokutshekisha, ukubeka esweni kwezempilo, ukulinganisa i-speed, ii-API zamandla kunye nokufumana umxholo wewebhu. Iibhotshi zisetyenziselwa ukuzenzekelayo ukuphicothwa kwezokhuseleko kwaye uhlalutye amasayithi akho ukuze ufumane ubunzima, ulungise ngokukhawuleza.
Ukuhlola ukuhluka phakathi kweeBob ezilungileyo nezimbi:
I-bots ingahlula kwiindidi ezimbini ezahlukeneyo, i-bots efanelekileyo kunye neendawo ezimbi. I-Bot botshelela iindawo zakho kwaye uncedise iinjinjini zokukhangela amakhaya ahlukeneyo ewebhu. Ngokomzekelo, i-Googlebot iyakhupha amaninzi kwiwebhusayithi kwiziphumo zeGoogle kwaye inceda ukufumana iphepha elitsha lewebhu kwi-intanethi. Isebenzisa i-algorithms ukuvavanya iiblogi okanye iiwebhsayithi kufuneka zikhawulwe, zingaphi ukukhahlela kufuneka zenziwe, kwaye zingaphi iiphetshana zikhohliweyo kude kube ngoku. Iintonga ezimbi zijongene nokwenza imisebenzi enobungozi, kubandakanywa ukukrwela i-website, ukuphawula ugaxekile , kunye nokuhlaselwa kweDDoS. Bamele ngaphezulu kweepesenti ezingama-30 zonke izithuthi kwi-intanethi..Abahlaseli bafeza i-bots ezimbi kwaye benza imisebenzi eyahlukileyo. Bahlaziya izigidi kwiibhiliyoni zamaphepha ewebhu kwaye bajolise ekutshitshweni okanye ukukrazula ngokungekho mthethweni. Baphinde badle i-bandwidth kwaye baqhubeke bejonge iiplagi kunye nesofthiwe engasetyenziselwa ukungena kwiiwebhusayithi kunye neenkcukacha zolwazi.
Ngokuqhelekileyo, ii-injini zokukhangela zijonga umxholo okhutshwe njengomxholo wokuphinda. Inobungozi kwiindawo zakho ze-injini yokukhangela kunye nezikrabhu ziya kuthatha iifayile zakho ze-RSS ukufikelela nokuphinda ushicilele umxholo wakho. Bafumana imali eninzi ngale ndlela. Ngelishwa, iinjongo zokukhangela azizange zisebenzise nayiphi na indlela yokulahla i-bots ezimbi. Kuthetha ukuba umxholo wakho upopashwe kwaye uyadluliswa rhoqo, indawo yakho yesayithi ibonakaliswe kwiiveki ezimbalwa. Iinjini zokukhangela ziphosa ii-sites eziqukethe umxholo wokubhaliweyo, kwaye abanakukwazi ukuba yiyiphi i-website eyapapasha kuqala isiqulatho somxholo.
Ayikho yonke into eyenza i-web ishicilelo
Simele sivume ukuba ukutshiza akuhlali kubangele kwaye kuyingozi. Ku luncedo kubanikazi bewebhu xa befuna ukusasaza idatha kubantu abaninzi ngangokunokwenzeka. Ngokomzekelo, iisayithi zikaRhulumente kunye neendawo zokuhamba zibonelela ngolwazi oluncedo luluntu jikelele. Olu hlobo lwedatha lufumaneka kwi-APIs, kwaye abaqashi baqeshe ukuqokelela le datha. Akunjalo, kuyingozi kwiwebhusayithi yakho. Ngona xa uhlawula oku kumxholo, akuyi kubonakalisa idumela lakho kwi-intanethi.
Omnye umzekelo wokutshatyalaliswa okwenene kunye nokusemthethweni kwiindawo zokuhlaziya ezifana neendawo zokubhuka kwehotele, amasayithi okukhatyathwa kweetikiti kunye neentengiso zeendaba. I-bots ezijongene nokusabalalisa umxholo wamaphepha ewebhu zifumana idatha nge-APIs kwaye ziyikhuphe ngokwemiyalelo yakho. Zijolise ukuqhuba i-traffic kunye nokukhipha ulwazi kwi-webmasters kunye nabaprogram.